EX - ABSDF: တရားဥပဒေ စိုးမိုးခြင်း လုံးဝမရှိသော နိုင်ငံ (၁)
တရားဥပဒေ စိုးမိုးခြင်း လုံးဝမရှိသော နိုင်ငံ (၁)
Aung Hein November 23, 2013 at 5:20pm
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ (၂ဝ၁၃ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် ၂၃ ။) ၁၃၇၅ ခုနှစ်၊ ဝါခေါင်လဆန်း ၁ ရက် (၂ဝ၁၃ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၇ ရက်) ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်း လိုက်သည်။
အစိုးရသစ်ပြောင်းလဲ ပြီးနောက် ကောင်းမွန်သောအစိုးရ သန့်ရှင်သော အုပ်ချုပ်ရေး ဖြစ်လာအောင် အစဉ်တစိုက်ကြိုးပမ်းသွားမည်ဟု ပြည်သူလူထုကို (မိဘပြည်သူများ ခင်ဗျာ ဟု အစချီကာ) မိန့်ခွန်းများတွင်သမ္မတကြီးက ကတိပေးပြောကြားခဲ့ပါသည်။
သို့ရာတွင် အဂတိလိုက်စားမူ ပပျောက်ရေး တစ်ခုကိုပင် အချိန်အထိ လျော့ပါးအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။ ကောင်းမွန်သန့်ရှင်းအောင် အုပ်ချုပ်တတ်သော အစိုးရအဖွဲ့ ဖြစ်လာရန် ယနေ့ထက်တိုင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိပဲ အဖွဲ့လိုက် အဆင့်ဆင့် အဂတိလိုက်စားနေသော အုပ်စိုးသူ အစိုးရအဖွဲ့ မျှသာ ဖြစ်နေကြောင်း အထောက်အထားစုံလင်စွာဖြင့် တင်ပြမည်ဖြစ်ပါသည်။
လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုဆိုသည်မှာ လုပ်ပိုင်ခွင့် အာဏာ ရှိသူက ရာထူး တာဝန်ကို အလွဲသုံးစားပြု၍ တစ်စုံ တစ်ရာကို ပြုလုပ်ရန်၊ ဥပဒေနှင့်အညီ ပြုလုပ်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ရန်၊ တစ်ဦးတစ်ယောက်အား ဥပဒေနှင့်အညီ ရထိုက်သော အခွင့် အရေးပေးရန် သို့မဟုတ် ဥပဒေနှင့်အညီ ရထိုက်သော အခွင့်အရေးကို မမှန်မကန် ပိတ်ပင်ရန် သော်လည်းကောင်း၊ သက်ဆိုင်သူ ထံမှ တံစိုးလက်ဆောင်ကို မိမိအတွက်သော်လည်းကောင်း၊ အခြားသူ တစ်ဦးဦး အတွက်သော် လည်းကောင်း၊ အဖွဲ့အစည်း အတွက်သော် လည်းကောင်း၊ ပေးခြင်း၊ လက်ခံခြင်း၊ ရယူခြင်း၊ ရယူရန် အားထုတ်ခြင်း၊ ကမ်းလှမ်းခြင်း၊ ကတိပြုခြင်း သို့မဟုတ် တစ်နည်း နည်းဖြင့် ဆွေးနွေး ခြင်းအား တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ ပြုလုပ်ခြင်းကို ဆိုသည်။(အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ)
ဆောင်ရွက်သင့်သည်ကို ဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိခြင်းသည်လည်ကောင်း၊ မလုပ်သင့်သည်ကို လုပ်ဆောင်ခြင်း သည်လည်းကောင်း အဂတိလိုက်စားခြင်းပင်ဖြစ်ပါကြောင်း ဖော်ထုတ်တင်ပြမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဆောင်ရွက်ချက်များ ရှိသော်လည်း ပီပြင်အောင် ဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိက
အဂတိလိုက်စားမူပင်ဖြစ်ပါကြောင်း တင်ပြပါမည်။ တိုက်ရိုက်အဂတိလိုက်စားမူမရှိသော်လည်း ဆောင်ရွက်သင့်သည်များကို ထိန်ချန်ထားသည်
(ခ) တင်ပြသော အဖွဲ့အစည်း
မြို့နယ်လယ်သမားအစည်းအရုံး( ရွှေပြည်သာမြို့နယ်) အမူဆောင်အဖွဲ့
ပြည်ထောင်စုကြံခိုင်ရေးနှင့် ဖွံဖြိုးရေးပါတီရုံး( ရွှေပြည်သာမြို့နယ်)
ဦးကျော်ငြိမ်း (ဥက္ကဌ) ဖုန်း ၀၉-၇၃၁၇၈၁၁၂
ဦးကြည်လှိုင် (အတွင်းရေးမှုး) ဖုန်း ၀၉-၄၂၁၀၉၅၄၅၉
ဦးစောထွန်း (အဖွဲ့ဝင်) ဖုန်း ၀၉-၄၂၀၂၁၉၁၂၂
ဦးကျော်ထွန်း ( ။ ) ဖုန်း ၀၉-၄၂၀၇၀၂၄၃၁
ဦးတင်လှ ( ။ ) ဖုန်း ၀၉- ၄၂၀၀၁၀၇၃၈
ဦးဌေးညွန့် ( ။ ) ဖုန်း ၀၉- ၄၂၀၀၀၁၄၀၇
ရွှေပြည်သာမြို့နယ် အမူဆောင်အဖွဲ့၏ အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရ ( အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်ကို နောက်ဆက်တွဲဖြင့် ဖော်ပြပါမည်)
လူမူကွန်ရက်(ဖေ့ဘုတ်)မှတဆင့် ပြည်သူလူထုနှင့် ပြည်တွင်းပြည်ပ သတင်းဌာနများ သိစေရန်နှင့် ပြန်လည် တင်ပြနိုင်ရန်အလိုငှာ တင်ပြရခြင်း ဖြစ်ပါသည် ။ အထက်ပါဖုန်းနံပါတ်များကို စုံစမ်မေးမြန်းစေလိုပါသည်။ အသေးစိတ် မေးမြန်းခြင်းဖြင့် ဖြစ်ရပ်မှန် ဟုတ်မဟုတ် အတည်ပြု ခြင်းဖြင့် ၀ိုင်းဝန်းဖော်ထုတ်စေချင်ပါသည်။ ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရပ် အသေးစိတ်ကို သိလိုသော ထပ်မံ တင်ပြလိုသော သတင်းဌာနများအနေဖြင့် သတင်စာရှင်းလင်းပွဲများလုပ်ဆောင်ကြကာ အဂတိလိုက်စားမူ ကို ဖော်ထုတ်ပေးကြပါရန် အထူး နိုးဆော် တိုက်တွန်း တင်ပြလိုက်ပါသည်။
ဖြစ်ရပ်ပါ ပြဿနာရပ်များကို နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်၊ ဒုတိယ သမ္မတ ဦးဥာဏ်ထွန်း၊ ဦးတင်ထွဋ်( လယ်ယာမြေနှင့် အခြားမြေများ သိမ်းဆည်းခံရမူကြောင့် နစ်နာမူပြည်သူများ နစ်နာမူမရှိစေရေးအတွက် စုံစမ်းရေးကော်မရှင်) တို့သိရှိဆောင်ရွက်ပြီးကြောင်းနှင့် ၄င်းတို့၏ ဆောင်ရွက်ချက် တစ်စိတ် တစ်ဒေသကို တင်ပြမည်ဖြစ်ပါသည်။
(ဂ) ပါဝင်ပတ်သက်စုံစမ်းစစ်ဆေးသော အဖွဲ့အစည်းအမည်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များ
(လယ်ယာမြေနှင့် အခြားမြေများ သိမ်းဆည်းခံရမူကြောင့် နစ်နာမူပြည်သူများ နစ်နာမူမရှိစေရေးအတွက် စုံစမ်းရေးကော်မရှင်)
ဦးတင်ထွဋ် (အဖွဲခေါင်းဆောင်) ဖုန်း ၀၉ -
ဦးကျော်မြင့် ( အဖွဲ့ဝင်) ဖုန်း ၀၉- ၄၂၀၁၀၃၄၀၇
ဦးအောင်သိန်းလင်း (အဖွဲ့ဝင်) ဖုန်း ၀၉ - ၈၆၀၀၁၄၂
ဦးခိုင်မောင်ရည် ။ ။ ၀၉-၅၀၆၉၃၄၀
ဒေါက်တာမြင့်ကြည် ။ ။ ၀၉-၄၉၃၃၅၉၁၉
ဦးအောင်ဇင် ။ ။ ၀၉ -၇၃၁၉၀၉၁၉
ဒေါ်ခင်ဝိုင်းကြည် ။ ။ ၀၉- ၇၃၁၁၀၅၄၅
ကိစ္စရပ်များအတွက် လယ်ယာမြေနှင့်အခြားမြေများ သိမ်းဆည်းမူ စုံစမ်းရေးကော်မရှင် အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်နှင့် အဖွဲဝင်များထံ ဖုန်ဆက်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
ဒုသမ္မတ လက်ထဲသို့ အရောက်ပေးပို့ပြီးဖြစ်ပါသည်
(၁) အမှတ်(၄) လမ်းမဘေး၊ ၂/၃/၄/ ရပ်ကွက်ကြားရှိ ပလပ်ကျန်လယ်မြေစာရင်း( နောက်ဆက်တွဲဖြင့် ဖော်ပြထားပါသည်)
(၂) အိုးအိမ်ဦးစီးဇဌာနမှ သိမ်းယူရွေ့ အိုးအိမ်စီမံကိန်းဆောက်လုပ်ပြီး ပြင်ပတွင်ကျန် (ပလပ်မြေ) ပေါ်တွင် အဆောက်အဦးများ
ရွှေစက်ဝန်းကုမဏီမှ လယ်သမားနှင့်ညှိနှိုင်းမှုမရှိဘဲ လယ်မြေများပေါ်တွင် အဆောက်အဦးဆောက်လုပ်ခြင်း၊ ခြံစည်းရိုးခတ်ခြင်း များကို တားမြစ်ပေးပါရန်ကိစ္စ။
(၄) လယ်ယာမြေနှင့် အခြားမြေများသိမ်းဆည်းခံရမှုကြောင့် နစ်နာသူများမှ သက်ဆိုင်ရာသို့ တင်ပြ၍ နစ်နာနေသူများ ဖြေရှင်းနေသည့် လယ်မြေများနှင့် အခြားမြေများတွင် ခြံစည်းရိုးခတ်နေသည့် ကိစ္စ။
ဦးအောင်သိန်းလင်( ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စာလှယ်) ဖုန်း ၀၉၈၆၀၀၁၄၂
ရွှေစက်ဝန်းကုမဏီမှ လယ်သမားများနှင့် ညှိနှိင်းမူ မရှိပဲ လယ်မြေပေါ်တွင် အဆောက်အဦး ဆောက်လုပ်ခြင်းကို တားမြစ်ပေးပါရန် တိုင်ကြားခြင်းကိစ္စ
တောင်သူ ဦးကြည်လှိုင် (ဖုန်း) ၀၉၄၂၁၀၉၅၄၅၉ တိုင်ကြားစာ
အကူအညီတောင်းခံစာတင်ပြခြင်း( ဦးတင်မောင်ဦး ၊ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
မှ တိုင်းဒေသ၀န်ကြီးချူပ်ဦးမြင့်ဆွေထံ အကူအညီတောင်းခံခြင်း)
ဦးတင်မောင်ဦး (လွှတ်တော်ကိုယ်စာလှယ်) ဖုန်း ၄၃၀၈၈၈၇၅
(၇) စနစ်တကျ တိုင်းကြားသော်လည် အတင်းဝင်ရောက် အဆောက်အဦဆောက်ထားသည့်ပုံနှင့် ခြံခတ်ထားသော ဓါတ်ပုံ
လယ်ပိုင်ရှင်ဦးကြည်လှိုင်၏ ဖုန်း ၀၉-၄၂၁၀၉၅၄၅၉
(၈) ဌာနမှူး (အင်ဂျင်နီယာနှင့် အဆောက်အအုံဌာန) မြိုနယ်စည်ပင်သာယာရေးဦးစီဌာန ( ရွှေပြည်သာမြို့နယ်)
ရွှေစက်ဝန်းကုမဏီမှ လယ်သမားနှင့်ညှိနိုင်းမူမရှိပဲ လယ်မြေများပေါ်တွင် အဆောက်အဦ ဆောက်လုပ်နေခြင်းအား
အစိုးရအဖွဲ့၏ ၂၅.၁၂.၂၀၁၂ ရက်စွဲပါ စာအမှတ် ၂.၃.၂.စီပွား(၄၀၂၆) ကို ရည်ညွန်းသည်။ ရည်ညွှန်းချက်ပါ စာများဖြင့် တိုင်း၊ ခရိုင်၊ မြိုနယ် အဆင့်ဆင့်က ရပ်ဆိုင်းရန်တားမြစ်ထားခြင်းကို ရည်ညွှန်းပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် အုပ်စုဖွဲ့၍ အဆင့်ဆင့် အဂတိလိုက်စားနေသည်မှာ ကြာမြင့်ပြီဖြစ်ပါသည်။ အဂတိလိုက်စားမူကြောင့် တရားဥပဒေ စိုးမိုးခြင်းမရှိတော့ပေ ။ ကာလရှည်ကြာစွာအမြစ်တွယ်နေသော အဂတိလိုက်စားမူကို
တိုက်ဖျက်ရန်မှာ တနိုင်ငံလုံးတွင် မှီတင်းနေထိုင်ကြသော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးအားလုံး၏ တာဝန်ပင်ဖြစ်ပါသည်။
တင်ပြထားသော အထောက်အထားတို့ မှန်မမှန် စစ်ဆေးလိုသော အဖွဲ့ အစည်းအသီးသီးနှင့် ပြည်တွင်းပြည်ပ သတင်းဌာနများကို ဖိတ်ခေါ်လိုပါသည်။ အားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖော်ထုတ်ကြလျှင် အမိမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ အဂတိလိုက်စားမူ တစ်စိတ်တစ်ဒေသ ကို ဖော်ထုတ်ရှင်းလင်းနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အဂတိလိုက်စားမူ ကို လူထုလူတန်းစာမရွေး ဖော်ထုတ်ကြရန်သမ္မကြီး က ၄င်း၏ မိန့်ခွန်းများတွင် အကြိမ်ကြိမ် ပြောကြားခဲ့သည် ကို မိဘပြည်သူများ အသိပင်ဖြစ်ပါသည်။
ဖော်ပြ ပါ စာရွက်စာတမ်းများသည် နစ်နာနေသော တောင်သူလယ်သမားများကို ကုစားပေးသယောင်ပြုမူထာသည့် ဖြစ်ရပ် များသာ
ဖြစ်ပါကြောင်း ထင်ရှားစေရန် တင်ပြထားခြင်းသည်ဖြစ်ပါသည်။ မည်သည့် အဖွဲ့အစည်း အသီးသီးကိုမျှ ထိခိုက်နစ်နာစေလိုသော
ရပ်ကွက်ကျေးရွာ ၊ မြိုနယ် မှသည် တိုင်း၊ ဗဟို အဆင့် ထိတိုင်အောင် တင်ပြထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ အထက်အဆင့်အဖွဲ့ အစည်းအသီးသီးက အရေးယူမူ ပြုမည် ဟု အကြောင်းကြားထားသော်လည်း မူလလက်ငုတ်ဖြစ်သူ တောင်သူ၏ ရပိုင်ခွင့်အပေါ် လုံးဝ လျစ်လျူရှုကာ ဗိုလ်ကျနေခြင်း သည် မလျော်ညီသော အပြုအမူသာဖြစ်ပါသည်။ မူလပိုင်ရှင်ကို အရေးမစိုက်ပဲ အတင်းဝင်ရောက် ခြံစည်းရိုး ခတ် ၊ အဆောက်အဦးဆောက်ခြင်းသည် တရားဥပဒေ အထက်က လူ နှင့် တရားဥပဒေအထက် က ပုဂ္ဂိုလ်များသာ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။ သို့တည်းမဟုတ် ဥပဒေ ကိုလက်တစ်လုံးခြားလုပ်သူများ ဖြစ်သော အထက်အာဏာပိုင် အသီးသီးကို လာဘ်လာဘ ပေးထားသူများသာ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။ ထိုကြောင့်ပင် ယင်းကဲ့သို့ ပြုမူ ဆောင်ရွက်သူများသည် မည်သူကို မျှဂရုစိုက်သူများမဟုတ်ကြောင်း၊ တည်ဆဲ ဥပဒေအမျိုးမျိုး ကို လေးစားလိုက်နာခြင်းမရှိကြောင်း ထင်ရှားပေါ်လွင်ပါသည်။
အထက် အဖွဲ့ အစည်း အသီးသီ က ၀င်စာ ထွက်စာ အမျိုးမျိုးဖြင့် တားမြစ်သည်ဆိုသည်မှာလဲ ဟန်ပြ သာပြုမူလုပ်ဆောင် ကြကြောင်းသိသာစေပါသည်။ အမှန်တကယ် ပြင်းပြင်းထန်ထန် အရေးယူဆောက်ရွက်ခြင်းကို ဆောင်ရွက်ကြလျှင် ယခု ကဲ့သို့ ဖြစ်ရပ်မှ ရှောင်ကြဉ် နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
လုပ်ပိုင်ခွင့် ရှိသော အထက်အဆင့်ဆင့် အဖွဲ့အစည်းများက အရေးယူသယောင် ဟန်ဆောင် ပြုမူကြလျက် ထိထိရောက်ရောက် ပြင်းပြင်းထန်ထန် အရေးမယူသောကြောင့်
ယခု ကဲ့ သို့ မတရားမူများ ပေါ်ပေါက်နေရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ စီမံကိန်းမအောင်မြင်သဖြင့် ပလပ်မြေ ( စိုက်ပျိုးမူမရှိသောမြေ) ဖြစ်နေသောကြောင့် မူလလယ်ပိုင်ရှင် ကို ပြန်လည်ပေးအပ်ရမည်အစား အတင်းဝင်ရောက်
ခြံခတ်ခြင်း၊ အဆောက်အဦများဆောက်လုပ်ခြင်းများသည် တရာဥပဒေစိုးမိုးခြင်းမရှိသည်ကို ထင်ဟပ် နေပါသည်။
နိုင်ငံတော် တည်ဆောက်ရေး တာဝန်သည် ပြည်သူတရပ်လုံးနှင့် သက်ဆိုင်ပါသောကြောင့် အဆိုပါဖြစ်ရပ်အား နိုင်ငံတစ်ကာ သတင်းဌာနအရောက် တာဝန်သိသူများ ပို့ဆောင်ပေးကြပါရန် တိုက်တွန်းနိုးဆော်လိုက်ပါသည်။
တင်ပြရန်ကျန်ရှိသော နောက်ဆက်တွဲ မှတ်တမ်းနှင့် ဓါတ်ပုံများ
ဦးတင်လှ ၀၉ ၄၂၀၀၁၀၇၃၈
ဦးဌေးညွန့် ၀၉ ၄၂၀၀၀၁၄၀၇
အမှတ်(၄) လမ်းမဘေး၊ ၂/၃/၄/ ရပ်ကွက်ကြားရှိ ပလပ်မြေ ကျန်လယ်မြေစာရင်း
ယနေ့ခောတ် နိုင်ငံရေးကို သရော်နေသော ကာတွန်း
တင်ပြရန်ကျန်ရှိသော နောက်ဆက်တွဲ သတင်းမှတ်တမ်းနှင့် ဓါတ်ပုံများ
ရက်နေတွင် လယ်ပိုင်ရှင် ဦးကြည်လှိုင် မှ သတိပေးတားမြစ်ထားသော ဆိုင်းဘုတ် ကို မြို့နယ်စည်ပင် သာယာ( ရွှေပြည်သာမြိုနယ်) မှ လာရောက်သိမ်းယူ
ဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ လယ်ပိုင်ရှင် ဦးကြည်လှိုင်၏ ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းမှာ ၀၉-၄၂၁၀၉၅၄၅၉ ဖြစ်ပါသည်။
ပလပ်နေသော မြေကို အတင်းဝင်ရောက်အဆောက်ဦးဆောက်ထားသည့် ပုံဖြစ်ပါသည်။ တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ၊ ခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနနှင့် မြို့နယ်အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန က အဆောက်အဦ ဆောက်လုပ်ခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းခိုင်သော်လည်း ရပ်ဆိုင်းသွားခြင်းမရှိပဲ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသည် အဆောက်အဦးဖြစ်ပါသည်။
ဦကျော်ငြိမ်း ဥက္ကဌ ၀၉ -၇၃၁၇၈၁၁၂
ဦးသန်းအုန်း ဒု-ဥက္ကဌ ၀၉-၄၉၀၀၂၆၄၉
ဦးကြည်တိုး တွဲဖက် အတွင်းရေးမှူး ၀၉-၀၉-၄၂၀၃၁၅၄၂၄
တောင်သူလယ်သမားအသင်း အမူဆောင်အဖွဲ့ သည် ၂၅.၁၁.၂၀၁၃ နေ့ နေလည် ၁၂ နာရီအချိန်တွင် တောင်သူလယ်သမား အစည်းအရုံး အစည်းအဝေးခန်းမှတွင် အမူဆောင်အဖွဲ့ မှ အောက်ပါအတိုင်းဆုံးဖြတ်ကြပါသည်။
လယ်ယာ သိမ်းဆည်းခံရပြီး လယ်သမားများ၏ နစ်နာမူများအပေါ် ယခုအချိန်ထိ အာဏာပိုင်အဖွဲ့ အစည်းများမှ ဆောင်ရွက်နေမူအား အင်တာနက် မှတဆင့် သက်ဆိုင်ရာ
လူကြီးမင်းများသိရှိနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ခြင်းကို သဘောတူကြောင်းဆုံးဖြတ်ကြပါသည်။
၂။ ပြည်တွင်းပြည်ပ သတင်းဌာနများနှင့် ပြည်သူလူထု တရပ်လုံး ကို ၄င်းကိစ္စများ တင်ပြဆောင်ရွက်ရန်ကိုလည်း အများမှ သဘောတူကြောင်း ဆုံးဖြတ်ကြပါသည်။
မြို့နယ် လယ်သမား အစည်းအရုံး (ရွှေပြည်သာမြို့နယ်)
ရွှေပြည်သာမြို့နယ်တောင်သူလယ်သမား အစည်းအရုံး( အမူဆောင်အဖွဲ့)
ရွှေပြည်သာမြို့နယ်တောင်သူလယ်သမား အစည်းအရုံး( အမူဆောင်အဖွဲ့) ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်များ
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက် ...
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၂၉-၁၁)
ဆိုဗီယက် နဲ့ ဘာကွာသလဲ/ ဘိုဘိုကျော်ငြိမ်း
ကျနော်နဲ့ ခရီးကြမ်းလမ်း (၄)
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၂၈-၁၁)
ကျနော်နဲ့ ခရီးကြမ်းလမ်း (၃)
သန်း ၄၀ ကို ဘယ်လိုစည်းရုံးရေးဆင်းမလဲ???
မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ကမ္ဘောဒီးယား သင်ခန်းစာ
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၂၇-၁၁)
စီးပွားရေးနှင့် လူမှုပြောင်းလဲမှုအတွက် အခြေခံမူဘောင်...
ကျနော်နဲ့ ခရီးကြမ်းလမ်း (၂)
ကျနော်နဲ့ ခရီးကြမ်းလမ်း (၁)
((( Save လုပ်ပြီး သိမ်းထားရမဲ့ စာအုပ်အစုံပါတဲ့ Lin...
အန်ကယ် ဦးထွေးမြင့် ကောင်းရာသုဂတိ လားပါစေ
ပါမောက္ခ ဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက် ရဲ့ EQ နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ...
"ရင်းလေ.. ချာလေ.." ဆိုတဲ့ အရင်းအချာတွေနဲ့ကြီးစိုးေ...
၂ ၅ နှ စ် အ ချိ န်တွေ .... ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အတွက် စာတစ်စောင် - မသီတာ (စမ်းခေ...
ရဲဘော်မင်းဇော်ဦး (သို့မဟုတ်) နဂါး။
ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ အောင်ထွန်းသက်၏ "Good Corporate Gov...
Bo K Nyein မှတ်စု ....
ပိုက်ဆံအကုန်ခံပြီးတော့ကို ကြေငြာတာ ခင်ဗျ!!!
စင်ပြိုင်အစိုးရ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးပီတာလင်းပ...
"တရုတ်အစိုးရမှ ရန်ကုန်မြို့ရှိတရုတ်သံရုံးသို့ ဦးသ...
ဘယ်ကလာပြီး ဘာတွေလုပ်လို့ ဘယ်သွားမှာလဲ ဒီဗွီဘီ
လက်ပံတောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မီဒီယာ ဖော်ပြချက်များ
သစ်ထူးလွင် (သို.မဟုတ် ) ရဲဘော်ကိုဒီ
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၂၀-၁၁)
``` ......... သူငယ်ချင်းထံပေးစာ ...........´´
အာဏာရှင်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်း၏ ဇတ်သိမ်းခန်း အပိုင်း (၁၀...
မိအေး နှစ်ခါမက နာနေရသည့် ကြွေးကျန်ကိစ္စ
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၁၉-၁၁)
အော်စလိုမှာ လာမဲ့၂၁ ကြာသပတေးနဲ့ ၂၂ သောကြာနေ့မှာ ပဲ...
အမျိုးသားရေးနစ်နာချက်များနှင့် တုန့်ပြန်မှု ပုံသဏ္ဍန်...
“ ကျော်နေ၀င်း၊ အေးနေ၀င်းတို့က ပေးတဲ့ သင်ခန်းစာ ”
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၁၈-၁၁)
Daw_Khin_Kyi_Foundation ဟောပြောပွဲ (ဆရာကျော်ဝင်း)
`` ကျွန်တော် နားလည်ထားတဲ့ နိုင်ငံရေး အခြေခံသဘောတရာ...
U-G 18 (သို့ ) ဖြစ်ရပ်မှန် ဒီမိုကရေစီ သမိုင်းနောက်...
နိုင်ငံရေးကို လေ့လာဖို့ နေရာတစ်ခု ဖန်တီးနေသူ (သို့...
ရွှေတောင်သား ဆရာကြီး သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း အကြောင်း
လက်ပတောင်း အရေးတော်ပုံမှ မဟာသူရဲကောင်းများ
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ငွေသုံးစွဲနေသော လုပ်ငန်း၊ ဘတ်ဂျတ...
"သီတာ၊ ရာမ နဲ့ ဒေါ်စု"
မြန်မာနိုင်ငံမှာ လျှပ်စစ်ဈေးနှုန်းများ ရုတ်တရက်မြှ...
ကွန်ဆိုစီရေးရှင်း ဒီမိုကရေစီ (၁+၂)
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု ( ၁၂-၁၁)
ထိုင်း လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ဂယက်နဲ့ သင်ခန်းစာ
အဘ သခင်လှကြိုင်အတွက် ကောက်ခံရရှိသည့် အလှူငွေ
မြန်မာပြည်၏ ထိပ်သီးခရိုနီတဦးအကြောင်း တစေ့တစောင်း (...
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၁၀-၁၁)
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု ( ၉-၁၁)
အဘ သခင် ဦးလှကြိုင်၏ ရာဇဝင်အကျဉ်းချုပ်
လူ့အခွင့်အရေးများ ဘယ်လို စတင် လာခဲ့သလဲ။။။ မျိုးသန်...
ထူးအိမ်သင် ရေးခဲ့သော "အရေးကြီးပြီ" သီချင်းဖြစ်ပေါ်လ...
တိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေးသမိုင်းမှာ သူတို့ပါခဲ့တယ် ဒါပေ...